Izinto ezi-6 obungazazi mayelana 'bukhoma noKelly noRyan' - Ukuzijabulisa
Izinto ezi-6 obungazazi mayelana 'bukhoma noKelly & Ryan'
6 Things You Didn T Know About Live With Kelly Ryan
UKelly Ripa uqalise ngokusemthethweni ukukhiqizwa okujwayelekile ngomhlaka- Phila noKelly noRyan eceleni komhlanganyeli wakhe, uRyan Seacrest (okungachaza ukuthi kungani esanda kubonwa egqoke ingubo ehloniphekile lapho eya emsebenzini). Ukuhlonipha ukubuyiswa okusemthethweni kombukiso wezingxoxo eestudiyo, asikwazanga ukuzibamba ukumba lawa maqiniso angaziwa ngokuthi yini eyehla lapho amakhamera engahambi. Kusukela endaweni engemuva kuya ezingxoxweni eziphindiwe, nazi izinto eziyisithupha (mhlawumbe) obungazi ngazo Phila noKelly noRyan .
OKUSHIWO: Iyini Inzuzo KaKelly Ripa? Kuyindlela * Engaphezu Kokucabanga Kwethu
I-Astrid Stawiarz / Getty Izithombe
1. Phila ithwetshulwe eNew York
Phila noKelly noRyan udutshulwe enhliziyweni yeManhattan. Isitudiyo saseLincoln Square sisekhoneni laseWest 67th naseColumbus Ave. Ngaphambi kobhadane lwe-coronavirus, lolu chungechunge lwaluqoshwa phambi kwezithameli ezibukhoma (ezifana ne- Umbukiso we-Ellen DeGeneres ).
2. Kuyisipina se- Phila noRegis noKathie Lee
Umbukiso ukhonjiswe ngaphansi kwabasakazi abahlukahlukene kusukela ngo-1983, kodwa awuzange uthole ukuthandwa okubanzi kuze kube ngu-1988 lapho kudlala khona uRegis Philbin noKathie Lee Gifford. Ngemuva kwezinkathi eziyishumi nambili, uGifford washiya umdlalo, okwadala ukuthi u-ABC afake uRipa esikhundleni sakhe ngo-2000.
Phila noRegis noKelly ubesemoyeni iminyaka eyishumi ngaphambi kokuthi uPhilbin athathe umhlalaphansi ochungechungeni. Ngaphandle kokushiya kwakhe njengomhlanganyeli, uPhilbin wayesabambe iqhaza kwi-BTS ku-spin-off kuze kube sekufeni kwakhe ngoJulayi 2020. USeacrest wanezelwa njengomphathi-mphathi kaRipa ngo-2017, ngemuva kokuhamba kukaMichael Strahan (owayengamele uchungechunge lwezinkathi ezine).
3. Ukubukeka kwangemuva akuyona into yangempela
Uyazi ukuthi isethi ibonakala kanjani ingakubheki phezulu isibhakabhaka saseNew York City? Awu, empeleni ingemuva. Indawo yolwandle uqinisekise imfundiso ku-Instagram lapho abelana ngesithombe sakhe emi kuvulandi wesethi.
Esigabeni sokuphawula, umlandeli ubuze ubuqiniso bendawo engemuva, ukubhala, Futhi lokho akuyona indawo yangemuva yesitudiyo? I-akhawunti yezokuxhumana yomdlalo iphendule, Hahaha! Ini?! (Yebo.)
UJared Siskin / Patrick McMullan / Getty Izithombe
4. Ababambisene nabo bafunda i-teleprompter
I-banter esesikrini i-Ripa ne-Seacrest ingahle ibonakale imsulwa, kepha iyaphindaphindwa. Ngaphambi kwesiqephu ngasinye, ababambisene nabo banikezwa amaphuzu okukhuluma, asebenza njengohlaka lwengxoxo yabo. Iskripthi sikhonjiswa kumqapha omkhulu we-TV (otholakala phambi kwamakhamera), ngakho-ke ababungazi bayazi ukuthi kufanele bangene nini ukuhweba nokuthi yini okulandelayo.
5. Futhi abahlali njalo eceleni komunye nomunye
Nini Phila iphinde yaqala ukukhiqiza okujwayelekile ngemuva kokuhamba ngamehlo ngenxa yobhadane lwe-coronavirus, abakhiqizi basebenzise izindlela eziningana zokuphepha ukuqinisekisa ukuthi bathobela imihlahlandlela yokuhlehlisa umphakathi.
Lokhu kufaka phakathi ukudala ibanga elingamamitha ayisithupha phakathi kweRipa neSeacrest ngesikhathi sokushaya. Ngemuva kokukhiqiza, abasebenzi bahlela okuqoshiwe ukuze kubonakale sengathi bahlala eduze komunye nomunye, yingakho isandla sikaSeacrest silokhu sinyamalala ngesikhathi sesiqephu sokuqala.
indlela yokuthuthukisa ukukhula kwezinwele
6. Abakhiqizi bayayamukela imibuzo ethunyelwe ngabalandeli
Kulungile. I- Phila iwebhusayithi ikhuthaza ababukeli ukuthi bahambise imibuzo kanye namazwana abo kubaphathi bezinhlelo. Zimbili izindlela zokwenza lokhu — okokuqala, ungathumela umyalezo oku-inthanethi nge bonisa ibhokisi lokungenayo elibonakalayo . Noma ungakwenza ngendlela yakudala yesikole bese uthumela incwadi ethayiphiwe noma ebhalwe ngesandla (khokha!) Ekhelini elisemthethweni le-studio:
Phila noKelly noRyan
7 ILincoln Square
ENew York, NY 10023
* Yengeza ekhelini lamakheli *
OKUSHIWO: Abalandeli bakaKelly Ripa Bayalahlekisela Ngaphezulu Kwesithombe Sakhe Somgibe Sokugcina Sokoma Somyeni Wakhe: ‘Ngingamsebenzisa Njengedivayisi Yokuthwebula’
yenza okuhle kwabanye abacaphuni
top hollywood love story movies
ama-movie aphezulu othando sonke isikhathi
uhlu lwama-movie we-amazon prime hindi